Momba anay - Suzhou Tianhongyi Elevator Technology Co., Ltd.
Ny Suzhou Tianhongyi Elevator Technology Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny Zhangjiagang City, Suzhou, mifanila amin'i Shanghai any atsinanana, ny Reniranon'i Yangtze any avaratra, ary Suzhou sy Wuxi any atsimo. Orinasa miavaka amin'ny R&D, famolavolana, famokarana, varotra, lozisialy ary serivisy fampidirana orinasa maoderina.
Ampidiro ny loharanom-baovaon'ny escalator sy ny ascenseur amin'ny alàlan'ny maodelim-piaraha-miasa iray, omeo vahaolana tokana ny mpanjifa mba hamoronana sanda ambony kokoa.
Ny tanjonay farany dia ny hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa manerantany. Hanohy hiasa mafy izahay hanolotra ny toe-tsaina manavao ny "matihanina sy manolo-tena".
Ny vokatra vokarinay dia misy ny ascenseur mpandeha, ny ascenseur villa, ny ascenseur mpitatitra entana, ny ascenseur fitsangantsanganana, ny ascenseur hopitaly, ny escalator, ny fivezivezena, sns. , vokatra Amidy indrindra any amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 30 manerantany. Hatramin'ny niorenany dia nanolo-tena hatrany ny orinasa hanome traikefa amin'ny ascenseur azo antoka, azo antoka, ary ahazoana aina ho an'ny mpanjifa manerantany. Izy io dia manaraka ny foto-kevitry ny mpanjifa, ny kalitao no mandresy amin'ny tsena ary ny fiaraha-miasa mandresy fandresena. Nahazo ny sain'ny mpanjifa ny sehatra serivisy manerantany miaraka amin'ny kojakoja feno.
Ny tanjontsika farany
Ny tanjonay farany dia ny hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa manerantany. Hanohy hiasa mafy izahay hanolotra ny fanahy "matihanina sy manolo-tena" fanavaozana ary vokatra sy serivisy tonga lafatra kokoa ho an'ny rehetra.
Tianhongyi Elevator dia vonona hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miasa manerantany hamorona ho avy mirindra sy tsara kokoa. !
Paikadin'ny marika anay